Realme X2 Pro waxaa si rasmi ah looga bilaabay Spain | Androidsis
Realme waa shirkad si cad suuqa uga sii kordheysa, isagoo horeba uga mid ahaa tobanka iibiye ee ugu fiican adduunka. Shirkaddu waxay ka shaqeyneysay soo gelitaankeeda suuqa Isbaanish dhowr bilood. Mid ka mid ah moodooyinka ugu dambeeyay ee la soo bandhigay waa Realme X2 Pro, kuwaas oo aan horeyba kuugu sheegnay wax walboo maalintiisa.
Qaabkan ayaa hadda si rasmi ah looga bilaabay Spain. Realme X2 Pro waa dhamaadka-sare ee sumadda, mid ka mid ah moodooyinka ugu awoodda badan ee ay nooga tagayaan qaybtan suuqan. Markaa waa daah-fur u daneynaya isticmaaleyaal badan.
Naqshadeynta taleefanka ayaa raacaya isbeddelka suuqa shaashaddiisa. Dhinaca dambe waxaan helnaa afar kamarad, taas oo noo oggolaan doonta inaan sawirro fiican ka qaadno mar walba, taas oo ka mid ah waxyaabaha muhiimka u ah taleefankan. Dareeraha sawirka faraha ayaa ka hooseeya shaashadda, sida caadada u ah baaxadda sare.
Realme X2 waxaa si rasmi ah looga bilaabay Spain
1 Tilmaamaha Realme X2 Pro
Tilmaamaha Realme X2 Pro
Realme X2 Pro waxaa loo soo bandhigay ikhtiyaar aad u dhameystiran qaybtan suuqa. Tilmaamaha wanaagsan guud ahaan, baytariga wanaagsan iyo kamaradaha si buuxda u hoggaansamaya. Layaab ma leh in ay tahay mid ka mid ah moodooyinka ugu caansan ee aan ka helno liiska shirkadda. Kuwani waa qeexitaankiisa buuxa:
Muuqaal: 6,5-inji SuperAMOLED leh 2.400 x 1.080 xalka px iyo heerka cusbooneysiinta 90 Hz
Kaydinta gudaha: 64GB / 128GB / 256GB
Batariga: 4.000 Mah oo wata SuperVOOC 50W Fast Charge
Kaamirada gadaal: 64 MP oo leh f / 1.8 aperture + 8 MP xagal balaaran oo leh f / 2.2 aperture + 13 MP telephoto oo leh f / 2.5 aperture oo leh 20 x hybrid zoom + 2 MP bokeh oo leh f / 2.4 aperture
Nidaamka hawlgalka: Android 9.0 oo leh midabka OS 6.1
Isku xirnaanta: 4G / LTE, WiFi 802.11 a / c, GPS, GLONASS, nooca USB C, Dual SIM
Kuwa kale: Dareenka faraha ee shaashadda hoostiisa, taageerada Dolby Atmos, NFC, wejiga furitaanka
Cabirka: 161 x 75,7 x 8,7 mm
Miisaan: 199 garaam
Sida aad u aragto, waxaa loo soo bandhigay sidii taleefan aad u dhammeystiran qaybtan suuqan ah. Waxay na siineysaa qeexitaanno wanaagsan oo la kulmaya waxa isticmaalayaasha badankood sameeyaan. Maaddaama Realme X2 Pro uu yahay mid awood badan, Thanks to Snapdragon 855 Plus oo ah processor. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay batari 4.000 mAh ah, kaas oo na siin doona ismaamul wanaagsan kiiskan. Haddii aan ku darno inay sidoo kale leedahay lacag degdeg ah 50W, waxaan filan karnaa waxqabad wanaagsan oo ku saabsan arrintan.
Kaamirooyinka ayaa suuragal ah inay yihiin kuwa inta badan indhaha ku haya. Realme X2 Pro wuxuu ahaa qaabkii ugu horreeyay iyadoo la adeegsanayo dareeraha 64 MP suuqa. Kani waa dareeraha ugu weyn, oo ay weheliso xagal ballaadhan, telefon iyo dareemayaal saamaynta bokeh. Isku-dhafnaan isku-dheellitiran, oo noo oggolaaneysa inaan wax badan ka soo qaadno kamaradaha aaladda calaamaddan. Dareere 16 MP ah ayaa loo adeegsadaa kamaradda hore, halkaasoo sidoo kale laga furo wejiga.
Isticmaalayaasha xiiseynaya taleefankan Waxaad horey uga sii sameyn kartaa boos celin rasmi ah gudaha Spain. Daahfurka taleefanka ayaa dhici doona dhawaan, inkasta oo taariikhda gaarka ah aan shaaca laga qaadin. Isticmaalayaasha daneynaya waxay awoodi doonaan inay ka iibsadaan bogga rasmiga ah ee shirkadda, marka lagu daro kuwa kale sida Amazon iyo PCComponentes. Waxaa la filayaa inaan sidoo kale awoodi doono inaan ka iibsano dukaamada jirka.
Realme X2 Pro waxaa laga bilaabay Spain saddex nooc oo kala duwan, waxay kuxirantahay RAM-kaaga iyo keydinta gudaha. Marka isticmaaleyaashu waxay awoodi doonaan inay doortaan nooca taleefankan oo iyagu aad u xiiseeya kiiskan. Qiimaha mid kasta oo ka mid ah noocyadan ayaa ugu dambeyntii la muujiyay, waxayna kala yihiin sidan soo socota:
Nooca leh 6/64 GB waxaa lagu bilaabay qiimo dhan 399 euro
Qaabka leh 8/128 GB waxaa lagu bilaabay qiime dhan 449 euro
Nooca leh 12/256 GB wuxuu leeyahay qiime rasmi ah 499 euro
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Realme X2 Pro waxaa si rasmi ah looga bilaabay Spain
Telegram wuxuu hagaajiyaa taranka maqalka ee cusbooneysiintiisa